Lacag been abuur ah oo maanta lagu gubay magaalada Gaalkacyo
October 29, 2012 - Written by
Magaalada Gaalkacayo ee xarunta Gobolka Mudug ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay lacag been abuur ah oo gaaraysa ilaa $135 kun oo dollar iyo 9,500,000 Sh. Soomaali ah ( sagaal milyan iyo shan boqol oo kun) oo ay ciidanka Booliska ee Gaalkacyo ay gacanta ku soo dhigeen ,lacagta been abuurka ah ee la soo bandhigay ayaa waxaa ay iskugu jirtay lacag Soomaali ah iyo Dollar waxaan lagu gubay meel fagaare ah.
Goobta lagu gubay lacagta been abuurka ah ayaa waxaa ka hadlay Taliye ku xigeenka Booliska dowlladda Puntlland G/Sare Muxiyadiin Axmed Muuse iyo weliba wasiir ku xigeenka amniga dowllada Puntlland Cabdi Jamaal Cismaan iyagoo si wada jir ah ula hadlay saxaafad iyo dadweynaha una sheegay in ciidanku ay qabteen lacag been abuur ah oo loo soo geliyo suuqyada si dadka ganacsatada ah xoolahooda loogu dhaco arrinkaas oo abuuri lahayd dhac baah san iyo dhibaato ku timaada Suuqyada lagu kala ganacsado ee deegaanada Puntland.
Wasiir ku xigeenada Amniga iyo maaliyada dowlladda Puntland Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed ayaa ku goodiyey in talaabo adag ay ka qaadi doonaa cid walba oo ku kacda danbi noocaan oo kale ah si loo dhibaateeyo dhaqaalaha bulshada rayidka ah ,Wasiirka ku xigeenka amniga dowlladda Puntlland ayaa waxaa uu mahad balaaran u jeediyey ciidanka Booliska ee magaalada Gaalkacyo sidda wanaagsan oo ay u soo qabteen lacagtaan been abuurka ah oo haddii ay suuqa geli lahayd lagu dhici lahaa ganacsatada.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska Puntland G/Sare Muxiyadiin Axmed Muuse oo qayb ka ahaa ciidankii Booliska ee Gobolka Mudug oo iyagu soo qabtay lacag taan been abuurka ayaa waxaa uu saxaafada u sheegay in lacagta la qabtay ay tahay mid lagu sameeyey gudaha Soomaaliya isagoo ka gaabsaday in uu sheego halka ay taal Makiinada samaysay lacagtaan beenta ah.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska dowllada Puntland G/Sare Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa waxaa kale oo uu xusay in fal danbiyeeda dhacaya ay yihiin kuwo abaabulan oo ay samaynayaan cid aadan ka filan karin isagoo tusaale u soo qaatay qof kula tukada salaada , mid macalin ka ahaa Macalinkii dugsiga iyo kii Machada diini ah.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska dowllada Puntland G/Sare Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa sheegay in ay dhacdo khalaadaa ka dhaca ciidanka Booliska marka howlgalku dhaco ama cid eedeysane ah oo la soo qabanayo arrinkaas oo loo baahan yahay in bulshadu ogaato
ayna ka digtoonaadaan dadka ay ka kiraynayaan guryahooda , baabuurtooda iyo weliba Hotellada si wanaagsana loola socodo.
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliiska dowllada Puntland G/Sare Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa sheegay in dadka falalka danbiyeedka geysyay ay ka kooban yihiin Burcad badeed iyo kooxo kale oo la shaqaysata oo ay wax wada qaybsadaan balse ku howl gala urur magaciis iyo qabiil.
Taliyaha ayaa ugu danbayntii waxaa uu ku booriyey dadweynaha ku nool degaanada Puntlland ay la shaqeeyaan ciidanka amaanka si loo adkeeyeyo nabadgelayad waxaan uu ugu baqay dowllada Puntlland in ciidankii soo qabtay lacagtaan been abuurka ah ay siiyaan abaal marin wanaagsan.